Iqela loyilo lwe-AutoDesk lisebenza njani-Geofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Indlela iWeododesk Design Team Works
I-AutoDesk igcina iNkqubo yaBasebenzisi abaBandakanyiweyo, i-acronym yayo ngesiNgesi CIP, nanjengokuba egqabaza UShaan Hurley, yindlela yokukwazi ukucebisa iimbono ezintsha.
Igrafu lubisi, ukuchaza indlela esebenza ngayo apha ndibeka umzekelo:
Umsebenzisi waseMadagascar uthenga iOfisi ka-2007 kwaye uthi:
-Heyi!, kuthekani ukuba i-AutoCAD ibonakala ngathi.- Ngoko thumela isicelo
Iqela loyilo liyayifumana, lifunda isindululo imizuzu emithathu emide. Ingcali yokuthengisa ithi le ngcamango ingaba yinto enhle kakhulu, bacacisa ukuyila kwengcamango kwaye bathethelele iimfuno zobugcisa emva koko bayithumele kwindawo yophuhliso ... okwangoku ingcali yokuthengisa idibana neqela lakhe ukulungisa iphothifoliyo.
Indawo yophuhliso ibeka ingqondo yayo kangangeenyanga kwaye ekugqibeleni iyithumele kuYilo.
-Owu Thixo wam, ngathi lizulu!
Banayo ifumaneke kubabheyisi, abaphendula ngazwinye:
-Yekabani ##$%& yayiyimbono?
Mhlawumbi ihlaya libaxiwe, kodwa ndicinga ukuba kufuneka kube nzima kumyili wesoftware ukwenza izigqibo apho imigaqo yokuthengisa isemthethweni ngakumbi kunothando lwenkqubo. Abanye bethu, abasele bekhanyise kangangeentsuku kuthi, abothuswanga yi I-Ribbon ye-AutoCAD 2009, ngaphezu kwakho konke kuba 15 kwiminyaka eyadlulayo xa Yafika i-AutoCAD eyi-R13 abaninzi badanduluka ezulwini kuba imiyalelo ngoku yayinemifanekiso yonqulo.
Kwisithuba seminyaka eli-15, akukho mntu uya kuyikhumbula le ngxaki... Ndinobuganga bokucinga ukuba abaninzi banokuba kwi-hammock enyamekela abazukulwana.
Impembelelo yohambo oluya eBolivia